मोन्टेरी प्रेमीहरूको अवधारणा र मन्टेरीरी बालबालिकाहरूको अवधारणा
सबै इन्द्रहरूसँग सिक्दै - मासेसोरीको महसुस 1000
मोन्टेरी स्कूलहरू र जर्मनीमा बालबालिकाहरू
"मलाई यो गर्न मलाई सहयोग पुर्याउनुहोस्", मोन्टेस्टोरीको अवधारणा - मन्टेसोरी अध्यापन विद्यार्थिय विद्यालयमा जान्छ। यो 1870 इटालीमा जन्मियो र राम्रो-मध्य-कक्षाको घरबाट आएको थियो।
क्रिश्चियन शिक्षित र राम्ररी यात्रा गरियो, तिनी विशेष गरी महिला अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारमा प्रतिबद्ध थिए। त्यो एक मानसिक विकलांग बच्चाहरु संग एक अस्पताल मा काम गरे, तर उनले पाया कि उनि सिक्न र ग्रहण गर्न तयार थिए, तर अझै सम्म सही अवधारणा को कमी छ।
मारिना मोन्टेस्टोरीले विशेष गरी यी बालबालिकालाई बच्चाहरु लाई विकास गर्न मद्दत पुर्याउन एक सेन्सर सामाग्री विकास गर्यो। यस आधारमा, मन्टेस्टोरी शिक्षिकाले वर्षौंमा विकास गर्यो। सम्पूर्ण शिक्षाको आधारभूत विचार ज्ञात मार्गदर्शक सिद्धान्त हो: मलाई आफैले यसलाई गर्न मद्दत गर्नुहोस्!
मन्टेसोरी शिक्षण पछि के हो?
मन्टेसोरी शिक्षिका बालबालिका शिक्षाको केन्द्रमा राख्छन्, बच्चा आफ्नै आफ्नै मालिक बनाउने र इनामको रूपमा उत्प्रेरित र सजावट सबै आवश्यक छैन। बच्चाहरू मन्टेस्सोरी अनुयायीहरूका अनुसार, आफैले जान्न र आन्तरिक उत्प्रेरित गर्न चाहन्छन्, किनभने वयस्क संसारमा भर्ना गर्ने विचार निर्णायक छ।
यी धारणाहरूमा आधारित, मोन्टेरी स्कूलहरूले धेरै निःशुल्क काम र खुला पाठ सिकाउँछन्। पाठहरूले बच्चाको कोठा प्रयोग गर्न र अनुभव प्राप्त गर्दछन्। आफ्नो प्रतिभा संग बच्चा अग्रभूमिमा छ, यो आफ्नो आफ्नै तालिम मा सिक्ने र विकसित को गति को निर्धारण गर्दछ। बरु, यो केवल चीज अनुकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उदाहरणका लागि, मोन्टेरीरी बालबालिकाहरूमा, छोराछोरीले फेरि ट्याब्लेट तय गर्न उत्प्रेरित हुन्छन् र फेरि फेरि हेरेर र केहि बिन्दुलाई मद्दत गर्न खोज्दै।
मन्टेसोरी शैक्षिकले बाल विकासलाई तीन चरणमा विभाजन गर्दछ। पहिलो बचपन चरण (0-6 वर्ष), दोस्रो बचपन चरण (8-12 वर्ष) र किशोरी (12-18 वर्ष)। सबै तीन चरणहरूमा इन्द्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, किनभने बालबालिकाहरूसँग स्वादको लागि प्राकृतिक स्वाभाविक हुन्छ, सबै कुरालाई स्पर्श र गन्ध गर्दछ।
मौलिक अर्थमा बुझेर मोन्टेरी स्कूल र किबोर्डगर्टन्समा आधारभूत विचार हो। सिकार सारिणी भन्दा सनसनीको माध्यमबाट सबै भन्दा राम्रो कामहरू सिक्न सक्दछ, त्यसैले सिक्नका लागि अझ राम्रो हुनेछ, अधिवक्ताहरू भन्नुहोस्। इन्द्रमा यो जोडको माध्यमबाट, विशेष सिकाउने सामग्री विकसित भयो। गणित मा, उदाहरण को लागि, संख्या को समझने बनाउन मोती हार को प्रयोग गरिन्छ, यो छ, ठोस छ। 1000 टुक्राहरु संग मोती को ब्लाकों को उच्च संख्या को प्रतीक हुन्छ र बच्चा को बेहतर कल्पना आकार को अनुमति दिछन - न सिर्फ टाउको मा, तर पनि महसूस गरे।
जर्मनीमा, 600 दिन हेरचाह केन्द्रहरू मारिया मोन्टेस्टोरीको अवधारणा अनुसार काम गर्छन्। 2013 को सुरुमा त्यहाँ 225 प्राथमिक विद्यालयहरू र 156 माध्यमिक विद्यालयहरू थिए जुन यी सिद्धान्तहरू पछ्याउँछन्। स्कूलहरू निजी रूपमा स्वामित्वमा छन् र बच्चाहरूको विकास आफ्नो लक्ष्यको केन्द्रमा राख्छन्।
प्रायः आलोचकहरू मोन्टेरी प्राथमिक विद्यालयबाट संक्रमणको रूपमा एक माध्यमिक विद्यालयमा हस्तान्तरण देख्छन्। तथापि, यो अतीतमा देखाइएको छ कि बच्चाहरुसँग कुनै पनि कठिनाइहरू छैन। पाठ्यक्रमको सामग्री एक नियमित विद्यालयबाट अलग छैन, तर बाटो महत्वपूर्ण छ, कसरी बच्चाले यो सामग्री सिक्न सक्छ।
नि: शुल्क काम, पार्टनर को छनौट, समूह कार्य, गति को लागि धेरै अवसर संग खुला शिक्षण, आफु को समय केवल केहि पहलुहरु जो मोंटेसरी स्कूलहरुमा खेलन को लागि केहि हो। अन्ततः, यी उपायहरूबाट बच्चाले लाभ उठाउँछ किनभने यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सिकाउँछ।